Mpanamboatra milina fanamafisam-peo vita amin'ny laoniny, mpamatsy - China Factory milina fametahana vita amin'ny lamba vita aminy
Fampiharana sy endri-javatra Mety amin'ny famolavolana kiho, tee, hazo fijaliana ary endrika Y (45 ° sy 60 °) fametahana PE, PP, PVDF ao amin'ny atrikasa. ► Nampiasaina koa mba hanitarana ny fantsom-panafody namboarina ary hanao fika azo ampidirina. ► Rafitra mifangaro. Tsy misy mijanona afa-tsy ny misafidy ireo clamp manokana samihafa rehefa manamboatra fittings samihafa. ► Takelaka fanamainana mifono PTFE azo esorina. Fitaovana fanomanana herinaratra miaraka amina switch switch. ► Tsindry fanombohana ambany sy firafitra tombokase azo antoka. ► Misaraka tw ...
Fampiharana sy endri-javatra Mety amin'ny famolavolana kiho, tee, hazo fijaliana ary endrika Y (45 ° sy 60 °) fanamoriana PE, PP, PVDF amin'ny atrikasa. ► Nampiasaina koa mba hanitarana ny fantsom-panafody namboarina ary hanao fika azo ampidirina. ► Rafitra mifangaro. Tsy misy mijanona afa-tsy ny misafidy ireo clamp manokana samihafa rehefa manamboatra fittings samihafa. ► Takelaka fanamainana mifono PTFE azo esorina. Fitaovana fanomanana herinaratra miaraka amina switch switch. ► Tsindry fanombohana ambany sy firafitra tombokase azo antoka. ► Misaraka ...
Fampiharana sy endri-javatra Mety amin'ny famolavolana kiho, tee, hazo fijaliana ary endrika Y (45 ° sy 60 °) fametahana PE, PP, PVDF ao amin'ny atrikasa. ► Nampiasaina koa mba hanitarana ny fantsom-panafody namboarina ary hanao fika azo ampidirina. ► Rafitra mifangaro. Tsy misy mijanona afa-tsy ny misafidy ireo clamp manokana samihafa rehefa manamboatra fittings samihafa. ► Takelaka fanamainana mifono PTFE azo esorina. Fitaovana fanomanana herinaratra miaraka amina switch switch. ► Tsindry fanombohana ambany sy firafitra tombokase azo antoka. ► Misaraka t ...
Fampiharana sy endri-javatra Mety amin'ny famolavolana PE mampihena tee ao amin'ny atrikasa. ► Fampiarahana miasa amin'ny famafana sy ny paompy ahafahana mamita ny fizotran'ny fanamboarana manontolo. ► bobongolo fanafanana PTFE nesorina. ► Asio fampandrenesana fantsom-pahitalavitra indroa amin'ny dingana mandemana sy mangatsiaka. ► Ny metatra faneriterena avo lenta dia manondro famakiana mazava kokoa. Ny fomba fitarihana Linear dia miaraka amin'ny takelaka fanafanana sy lovia fisarihana. ► Fanaraha-maso PLC misy amin'ny fizotrany mandeha ho azy mba hiantohana ny las ...